Litepanels, OConnor, Sachtler နှင့် Anton / Bauer ထုတ်ကုန်များချောမွေ့စွာထုတ်လုပ်ခြင်းသည် 'Mountain Rest' | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Litepanels, OConnor, Sachtler နှင့်ဆုချီးမြှင့်-အနိုင်ရရှိမှုရုပ်ရှင်ပွဲတော် '' တောင်ကျန် '' အဘို့အ Anton / Bauer ထုတ်ကုန်များချောမွေ့ထုတ်လုပ်မှု
Los Angeles - ဇူလိုင်လ 10, 2018 - Litepanels, OConnor, Sachtler နှင့် Anton / Bauer ကနေအမြင့်-performance ကိုထုတ်ကုန် - အားလုံး Vitec ထုတ်လုပ်မှု Solutions အမှတ်တံဆိပ် - "တောင်တန်းအနားယူ," စာရေးဆရာ / ဒါရိုက်တာအလက်ဇန္ O. Eaton ၏အင်္ဂါရပ်-ရုပ်ရှင်ပွဲဦးထွက်၏ထုတ်လုပ်မှုအတွက်သရုပ်ဆောင်အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်တစ်ခုမှတဆင့်ဖန်တီးခဲ့ AbelCine အင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်လွတ်လပ်သော (Find) နှင့် ပူးပေါင်း. ထောက်ပံ့ကြေး, အကထုတ်လုပ် Los Angeles မြို့-based ပြကွက် Entertainment က။
Frances Conroy, က Natalia ဒိုင်ယာ, ကိတ် Lyn Sheil နှင့် Shawn Hatosy Starring, "တောင်တန်းအနားယူ" တယောက်သောသူအားဖြင့်အတူတူနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်သူတစ်မိသားစုထဲမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့မျိုးဆက်သုံးဆက်အကြောင်းဆွဲဆောင်မှုဒရာမာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါရုပ်ရှင် Eaton အကောင်းဆုံးနယူးဒါရိုက်တာနှင့်အက်ရှလေ Connor, ဓါတ်ပုံပညာ၏ဒါရိုက်တာ, အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဆုကိုလက်ခံရရှိမှုအတွက်ပရိသတ်ဆုကိုဘယ်မှာ Nashville ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာမေလပြသဖို့။ "တောင်တန်းအနားယူ" ၏နောက်တစ်နေ့စိစစ်ကိပ်ကော့ဒ်အပေါ် Woods Hole ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာသြဂုတ်လ2ဖြစ်လိမ့်မည်။
၎င်း၏အင်္ဂါရပ်-ရုပ်ရှင်ရန်ပုံငွေမှတဆင့် AbelCineတစ်ဦး Vitec ထုတ်လုပ်မှု Solutions ပရီးမီးယားလိဂ် Partner က Co-sponsored တစ်ခု ARRI Alexa ကင်မရာနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများ loaner အထုပ်နှင့်အတူ "တောင်ငြိမ်ဝပ်စွာ နေ. " ထုတ်လုပ်မှုထောက်ပံ့ Vitec။ အထုပ်လေးမြင့်မားသောဦးထုပ်နှင့်အနိမ့်ဦးထုပ်နှင့်အတူ Litepanels Astra နဲ့ LED မီးလုံးတစ်ခု OConnor 2575 အရည်ခေါင်းနှင့် tripod, Sachtler အမြန်-လွှတ်ပေးရန်ပြားနှင့် Anton / Bauer Cine VCLX ဘက်ထရီပါဝင်သည်။
"မှထိုကဲ့သို့သောခေတ်မီပြီးထိပ်တန်းအရည်အသွေးဂီယာမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိခြင်း Vitec ထုတ်လုပ်မှု Solutions ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုအပေါ်ထိုကဲ့သို့သောခြားနားချက်ကိုဖန်ဆင်း - ပင်သေးငယ်တဲ့ဘတ်ဂျက်အပေါ်, ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးအလွန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ခံစားရ, "Eaton ကဆိုသည်။ အဆိုပါ Litepanels Astra နှင့်စပ်လျဉ်းအလင်းအိမ် LED ", 'တောင်ကျန်' 'အများကြီးမိုးရွာရွာအပြင်ဘက်လောင်းသောအခါပင်ညဥ့်သို့မဟုတ်မှာရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာကျနော်တို့မကြာခဏအလွန်သဘာဝအလျောက်မိုဃ်းလင်းဖန်တီးခဲ့ဓိပ်ပာသောအိမ်တွင်းပစ်သတ်ခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါ Astra ဘို့စိတ်ကူးရှိကြ၏, သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုကျနော်တို့မြင်ကွင်းတစ်ခုဆက်လက်များအတွက်လိုအပ်သည့်ဘက်စုံအပ်ပေးတော်မူ၏။ ငါ့ကိုဖို့အရမ်းအရေးကြီးတယ်လို့ရာသာကိုသဘာဝအလင်းကို အသုံးပြု. ပစ်ခတ်ခဲ့သည်တူသောတကယ်တော့, ရုပ်ရှင်ကြည့်ပါတယ်။ "
အဆိုပါ OConnor အရည်ခေါင်းနှင့် tripod နှင့် Sachtler ဆက်စပ်ပစ္စည်းအပေါ်မှတ်ချက်ပေး, Eaton ကျွန်တော်တစ်ဦးသေးငယ်တဲ့ထုတ်လုပ်မှုသတည်းကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှလျင်မြန်သွက်လက်ဖြစ်ဖို့လိုအပျ "ဟုပြောသည်။ အဆိုပါ OConnor အရည်ခေါင်းနှင့် tripod နှင့် Sachtler ဂီယာကျွန်တော်တို့ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အလွယ်တကူတည်နေရာကိုပြောင်းလဲခွင့်ပြု, အသုံးပြုရလွယ်ကူပေမယ့်အလွန်ပေါ့ပါးတဲ့မသာရှိကြ၏။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ယင်း tripod ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောဂူ၌၎င်း, တောအုပ်၌, ရေတံခွန်များမှာသေနတ်မြင်ကွင်းများအဖြစ်ပိုပြီးဆိုးဝါးနေသောနေရာများအတွက်ခဲ့ကြသည်အချိန်မှာတောင်ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ဦးအလွန်တည်ငြိမ်နှင့်အစိုင်အခဲအခြေစိုက်စခန်းအားပေးတော်မူ၏။ "
ErinRose Widner ၏ရုပ်သံလိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဒါရိုက်တာ Vitec ထုတ်လုပ်မှု Solutions, ဒါဟာနှင့်အတူမိတ်ဖက်တစ်ဦးအခွင့်ထူးခဲ့ "commented AbelCine နှင့်ကူညီပံ့ပိုးရန် FIND '' တောင်ကျန်။ ' ဒါကဆုရထုတ်လုပ်မှုထိုကဲ့သို့သောအဲလက်စ်နှင့်အက်ရှလေအဖြစ်ထွန်းသစ်စရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးထဲကအလှည့်နေကြတယ်, ဒါကြောင့်တစ်ဦး All-အမျိုးသမီးထုတ်လုပ်မှုအမှုထမ်းကိုထောကျပံ့ဖို့ ပို. ပင်စိတ်ကျေနပ်စရာဖြစ်ခဲ့သည်သောခြွင်းချက်အလုပ်များစွာသောသာဓကဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့များပြားလှသောတည်နေရာနှင့် enviroments မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များသုံးစွဲခြင်းဟာသူတို့ရဲ့ဘက်စုံသုံးများစွာသောသာဓကဖြစ်ပါသည်, အရည်အသွေး, နှင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုပေါင်းစပ်နိုင်စွမ်းနှင့်ကြှနျုပျတို့သညျဤစီမံကိန်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြဒါပျော်ရွှင်ပါ။ "
အပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များ Vitec ထုတ်လုပ်မှု Solutions နှင့်၎င်း၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှာရရှိနိုင် www.vitecgroup.com.
Vitec အဆိုပါအစာရှောင်ခြင်းပြောင်းလဲနေတဲ့နှင့်ကြီးထွားလာ "ပုံရိပ်ဖမ်းယူခြင်းနှင့်မျှဝေ" စျေးကွက်မှပရီမီယံ branded ထုတ်ကုန်များနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများတစ်ဦးဦးဆောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေးသူဖြစ်ပါတယ်။
Vitec'' s ကိုဖောက်သည်ထုတ်လွှင့်, လွတ်လပ်သောအကြောင်းအရာဖန်တီးသူ, ဓာတ်ပုံဆရာများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ, ငါတို့လှုပ်ရှားမှုများပါဝင်ပါဝင်သည်:, ကင်မရာအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ, စက်ရုပ်ကင်မရာစနစ်များ, prompters တပ်ဆင်ထား, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ကင်မရာကိုအထောက်အကူအပါအဝင်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ၏ဖြန့်ဖြူးအလင်းအိမ် LED, မိုဘိုင်းပါဝါ , မော်နီတာနှင့်အိတ်။ ကျနော်တို့ 1,700 ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများရှိကမ္ဘာတစ်လွှား 11 လူတွေကပတ်ပတ်လည် employ သုံးယောက်ရုံးခွဲများအတွက်စည်းရုံးနေကြတယ်: Imaging က Solutions, ထုတ်လုပ်မှု Solutions နှင့်ကို Creative Solutions ။ အဆိုပါ Vitec Group မှ plc £ 2017 သန်း၏ 378.1 ပြုပြင်ဝင်ငွေ * နှင့်အတူလန်ဒန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင်စာရင်းဖြစ်ပါတယ်။
နှုတ်ကပတ်တော်ကို Doc သို့ Link ကို: www.wallstcom.com/TheVitecGroup/180710VitecGroup.docx
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/TheVitecGroup/Mountain-Rest-Behind-The-Scenes.zip
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: "တောင်တန်းအနားယူ" ဟု The ကနေဆုရထုတ်လုပ်မှုဖြေရှင်းချက်ရေးအတွက်တစ်ခုလွတ်လပ်သောရုပ်ရှင်ထဲကနေနောက်ကွယ်မှ-The-မြင်ကွင်းများဓါတ်ပုံ Vitec Group မှ Litepanels, Anton / Bauer က Sachtler နှင့် OConnor အမှတ်တံဆိပ်။
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/TheVitecGroup/Mountain-Rest-Still-Images.zip
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: ရုပ်ရှင်ထဲကနေတုန်းပဲပုံများ, "တောင်တန်းအနားယူ," စာရေးဆရာ / ဒါရိုက်တာအလက်ဇန္ O. Eaton ၏အင်္ဂါရပ်-ရုပ်ရှင်ပွဲဦးထွက်။
Anton / Bauer ရုပ်ရှင်ရုံ LitePanels OConnor post ကိုထုတ်လုပ်မှု ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ Sachtler လှံ & Arrows အဆိုပါ vitec အုပ်စုတစ်စု 2018-07-12
ယခင်: အသံလွှင့် Pix EMEA အရောင်း Lead မှစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များဝါရင့် Carlo Bolognesi
နောက်တစ်ခု: DPA မိုက်ခရိုဖုန်းအမည်များနယူးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရောင်းပံ့ပိုး & လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမန်နေဂျာနှင့်ဒေသဆိုင်ရာအရောင်းမန်နေဂျာပစိဖိတ်အနောက်မြောက်